Onyinye Tech kacha mma maka ụbọchị nna | Akụkọ akụrụngwa
Onyinye ohuru kacha mma maka ụbọchị nna
Miguel Hernandez | 17/03/2021 11:56 | General
El nna nna Machị 19 na-esote ma eleghị anya ọ bụ oge dị mma iji gosi ya otu ị hụrụ ya n'anya na onyinye na-adọrọ mmasị. Na wearable na ị chọrọ na-agbalị nke ukwuu, ụfọdụ ọhụrụ ekweisi ma ọ bụ ọkà okwu, ma ọ bụ ọbụna gị mbụ ngwaahịa na a olu nnyemaaka otú ị pụrụ ịhụ ọtụtụ uru nke ya ọrụ.
Maka nke a, na maka anyị chọrọ ime ka ndụ gị dịkwuo mfe na Actualidad Gadget, Anyị na-ewetara gị ụfọdụ ngwa ndị kacha adọrọ mmasị iji nyefee n'ụbọchị Nna, lelee anya wee ju nna gị anya n'ụzọ kachasị dị.
Dị ka oge niile, yana dịka akara ederede anyị, na Actualidad Gadget anyị na-akwado ngwaahịa ndị anyị nyochara na weebụsaịtị anyị ma zute ogo dị elu, na-eburu n'uche ogo / ọnụahịa ha.
1 Igweisi na ihe eji ejiji
2 Ndị ọkà okwu Smart na ọdịnaya ọtụtụ
3 Ntụrụndụ na ngwa
Igweisi na ihe eji ejiji
Anyị na-amalite site na nkwanye maka ekweisi, na nke a, anyị na-aga otu n'ime ngwaahịa kachasị ọhụrụ anyị nyochara, Huawei FreeBuds 4i, ekweisi na-abịa na ọtụtụ uru ndị Huawei FreeBuds Pro nwere, mana yana nha nke a na-apụghị imeri emeri mma / ọnụahịa na-atụle ụfọdụ ngwaike ha nyere. Ha nwere nkagbu mkpọtụ na-arụ ọrụ, batrị karịrị 7 awa nke na-aga n'ihu na-aga n'ihu yana ezigbo ọdịyo dị elu. Mwepụta ego ahụ bụ € 69 ma ọ bụrụ na anyị ejiri uru nke ego 10 dị na weebụsaịtị nke Huawei.
Zụta Huawei FreeBuds 4i na ọnụahịa kacha mma na Amazon.
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ ngwaahịa ihe ọzọ adịchaghịNa Actualidad Gadget anyị nwalekwara mkpọtụ-ịkagbu ekweisi. N'okwu a, ndị kacha ju anyị anya na ogo / ogo ha bụ X Site Kygo A11 / 800, ekweisi na-ere na abụọ na agba dị iche iche na-enye a aka panel, nọ n'ọrụ mkpọtụ kagbuo, ngwa na nhazi nke ya na otutu ihe ndi ozo na ego nbibi nke euro 69,90.
Kygo A11 / 800, ihe kachasị adịchaghị maka ọdịyo nkagbu [Nyochaa]
Maka akụkụ ya, anyị na-atụgharị na nche elekere, otu n'ime ndị kasị ewu ewu "wearables". Anyị na-alaghachi na Huawei, ọ bụkwa ya bụ Watch GT 2 Pro Ọ na-positioned dị ka a ngwaọrụ dakọtara na ma gam akporo na iOS. Ọ bụ a pụtara gburugburu ngwaahịa na adịchaghị ihe, dakọtara eriri na a elu ogo customization ekele ya shopkpọ oku shop. Nwere ike ịchọta ya site na euro 199 na ụfọdụ isi ere, na-enye gị ohere izute ogo / ọnụahịa anyị chọrọ.
Nhọrọ ikpeazụ bụ otu n'ime ngwaọrụ ikpeazụ anyị nwalere, Jabra Elite 75t, ekweisi nwere wireless Nchaji, a elu nke na-eguzogide, a nnọọ kọmpat ikpe na uru nke iji Jabra Sound +, ee, Jabra Elite 75t -...
Ndị ọkà okwu Smart na ọdịnaya ọtụtụ
Ndị na-ekwu okwu nke ọma bụ usoro nke ụbọchị ma enweghị ike ịnọ na nchịkọta nke ndụmọdụ anyị. O doro anya na anyị na-amalite site na ntinye, ihe ọhụrụ Amazon Echo Dot, a na ngwaọrụ na n'agbanyeghị na "ejidela" nha toro ọtụtụ. Nhazi ahụ mara mma, ị nwere ike ịzụta ya na agba atọ na agba ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ nye gị nhọrọ nke ịgụnye elekere, ọ ga-abụ "dara oke ọnụ" na abalị nna gị. Ọnụahịa ahụ bụ euro 44 maka ụdị ahụ na-enweghị elekere, ọ bụ ezie na ụdị a na elekere na-aga 59 euro.
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ kama bụ ezigbo ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi, anyị na-akwado Amazon Fire TV Cube ọhụrụ, mbipute dị elu na Fire TV OS nke ga-enye gị ohere ịnweta ngwa, wụnye Android APKs, lelee Netflix, HBO na Movistar + ọdịnaya na mkpebi dị elu (ruo 4K dakọtara). Na ogo ya / ọnụego ya, ọ bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi kachasị mma nke ndị niile anyị gbalịrị, ịdị mfe nke iji ya dị na ọkwa nke ngwaahịa ndị ọzọ. Ọ bụ eziokwu na ọnụahịa gọọmentị ya bụ euro 119, n'ọtụtụ ọnọdụ enwere agbazigharị dị ọnụ ala ma na-enye ọnọdụ ahụ na euro 79.
N'otu ụzọ ahụ, anyị nwere ike iji ụda dị elu soro ngwaahịa ndị a, na nke a ị maralarị na anyị na-ekwukarị Sonos Beam, nke bụ ụda ụda zuru oke nke ị nwere ike itinye n'ụlọ gị, ma ọ bụ mezue ya, Sonos Otu, ụzọ mbụ iji bịaruo nso Sonos gburugburu na ọnụahịa kacha mma, mana ebe anyị na-ekwu maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi, anyị nọrọ na ogo / ọnụego ya na nzọ na nke kachasị, Sonos Arc. Anyị enweghị ike ikwu ihe ọ bụla ị maghị, Dolby Atmos, ntọala kachasị, Alexa, Google Home na Apple HomeKit zuru ezu ... Naanị ihe ngọpụ ka ị ghara ịzụta ya bụ na ọ na-efu euro 899, mana o kwesiri ya, n'enweghị obi abụọ.
Anyị nyere gị zuru okè mkpọ ịbanye Alexa na-etinye gị Spotify ma ọ bụ Apple Music music kacha, ngwaahịa nke atọ dị iche iche ahịa na na-emezu nkwa ya niile.
Ntụrụndụ na ngwa
Maka ntụrụndụ ka anyị na-akụ nzọ mgbe niile, anyị malitere Kobo Nia, otu n'ime ngwaahịa ndị a tụrụ aro site na weebụsaịtị nwanne anyị nwanyị bụ TodoeReaders, ngwaahịa a na-eme nke ọma, yana njirimara ndị a gbanwere na ọnụahịa nke ngwaọrụ ahụ na nke ahụ nwere ike ime ka nna gị banye na ọgụgụ dijitalụ, akwụkwọ elektrọnik na-echekwa ọtụtụ ego ma ha bụ dị nnọọ ọtụtụ.
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ mbadamba zuru ezu, ọ na-esiri ike ịchọta mmekọrịta ka mma mma / ọnụahịa karịa Huawei's MatePad 10.4. Ndị a bụ njirimara teknụzụ zuru ezu:
Ihe nhazi: Kirin 810
Nchekwa Ram: 4 GB
Nchekwa: 64 GB na microSD gbasaa ruo 512 GB
Ihuenyo: 10,4-anụ ọhịa IPS LCD panel na 2K mkpebi (2000 x 1200)
Igwe n'ihu: 8MP Wide n'akuku na FHD ndekọ
Igwefoto na-aga n'ihu: 8MP na ndekọ FHD na ọkụ ọkụ
Batrị: 7.250 mAh na ibu 10W
Njikọ: 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C OTG, GPS
:Da: Igwe okwu stereo anọ na igwe okwu anọ
Ihe a niile maka ọnụahịa nke euro 219, gbanwere nke ọma na-eburu n'uche njirimara ya na ohere niile ọ ga-enye anyị n'ogo ntụrụndụ. Dị ka ọghọm, ọ naghị abịa na arụ ọrụ Google arụnyere, mana ịnwere ike iwunye ha n'onwe gị ma emechaa.
Anyị agbalịrịkwa ndị na-ehichapụ ihe na-enweghị aka, ngwaahịa na-atọ ụtọ nke nwere ọtụtụ atụmatụ. Ihe omuma bu nyocha ohuru a site na Tineco, a handheld agụụ Cleaner na bụ ike nke na-asachapụ na ya. Ọ dị ịtụnanya ihe ụdị usoro a nwere ike ịkwado anyị kwa ụbọchị.
Ime anwansi na-abata na ogwe elu ya ọcha. Anyị nwere n'ime ya Qi na-akwụ ụgwọ Ikuku nke na-enye 5W nke ike, dị mma iji zere imebi batrị na ebubo abalị. Anyị nwekwara ebe a ọtụtụ bọtịnụ ga-enyere anyị aka ịhazigharị ma hazie Wake Up.
Igwe okwu na igwe okwu
10W ike zuru oke
2.0 stereo usoro
1 x 2,25-anụ ọhịa 8W ndị na-ekwu okwu zuru ezu
Igwe na-agafe agafe
Ugboro ugboro: 40Hz - 18 kHz na-erughị 1% ọnwụ
Igwe okwu 2x
Bluetooth 5.0 klas 2 (HSP - HFP - A2DP na koodu AVRCP)
Airplay na Spotify Jikọọ
Multiroom dakọtara na ES Smart Ọkà okwu na Multiroom nso
Ntinye Jack 3,5
Loading ọdụ ụgbọ mmiri
5W Qi Ikuku
Nwere ike ịzụta ya na ọnụahịa kachasị mma na Amazon site na EGO A.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Onyinye ohuru kacha mma maka ụbọchị nna
FÖRNUFTIG ikuku ikuku nke ikuku na IKEA
Mmemme 5 iji mepụta gifs ngwa ngwa na ngwa ngwa